Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Golaha Fulinta JWXO uu ku lahaa Stanbuul oo soo dhamaaday iyo Bayaankii ka soo baxay
Shirkii Golaha Fulinta JWXO uu ku lahaa Stanbuul oo soo dhamaaday iyo Bayaankii ka soo baxay
Posted by ONA Admin	/ June 29, 2013
Waxaa shir muhiim ah ku lahaa caasimadda dalka Turkiya ee Stanbuul Golaha Fulinta ee Jabahdda Wadaniga Xoreynta Ogadenya. Shirka oo bilowday 24kii bishan June ayaa shalay soo afjarmay. Mudanayaasha shirka ka soo qaybgalay ayaa mudadii uu socday shirka ku falanqeeyay arima badan oo muhiim u ah geedi socodka halganka uu shacabka Somalida Ogadenya ugu jiro Aaya-ka-tashigiisa. Waxaa kaloo ay xubnaha kula kulmeen halkaa khubaro loo xilsaaray inay soo eegaan sida ay isu waafaqsan yihiin halganka Shacabka S.Ogadenya iyo Qaanuunka Dawliga ah ee ka hadlaya Aaya-ka-Tashiga shucuubta ku jira gumaysiga.
Sidoo kale waxaa la’isla firriyay wadahadalkii u dhexeeyay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya iyo dawladda Itobiya oo hakaday, ka dib markii ay dawladda Itobiya ku gudubtay qodob aan markii hore ku jirin heshiiskii lawada gaadhay. Arintaana go’aan midaysan ayuu ka qaatay Golaha Fulinta ee JWXO.
Waxaa kaloo halkaa lagula kulmay khubaro tariikhyahan ah oo isu eegayay geedisocodka halganka shacabka S.Ogadenya iyo halganda ka soo hirgalay ama weli ka socda caalamka, si loo fiiriyo wadadii ay u mareen xuquuqda iyo aaya-ka-tashigooda.
Shirka oo intiisa badan ay isu kaliyaysteen xubnaha Golaha Fulinta ee JWXO ayaa si fiican la’isula jeexjeexay dhamaan ajandihii shirka la soo hrdhigay waxaana laga gaaday go’aano dhaxagal ah oo wax weyn ka tari doona geedi socodka halganka.
Ugu damabayntii wuxuu soo saaray shirka Bayaankan hoose.
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya JWXOG bayaan2013
Gudoomiyaha Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya oo shirka soo xidhay ayaa kula dardaarmay xubnaha Golaha Fulinta JWXO iyo guud ahaan shacabka halgamaya sidan;